सरकारले दीर्घ रोगीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने
काठमाडौं : सरकारले दीर्घ रोगीलाई मासिक रुपमा खर्च रकम दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र हृदयघात बिरामीलाई औषधोपचारका लागि मासिक पाँच हजारका दरले खर्च दिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।
त्यस्तै परिवर्तनविरुद्धको आन्दोल गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
बैठक र भ्रमण भत्ता कटौती गरेर सरकारले कोरोना खोप किन्न ५ अर्ब छुट्यायो
काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदका लागि थप ५ अर्ब रुपैयाँ छ्ट्याएको छ ।
संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बैठक तथा भ्रमण भत्ता र तालिमका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेर ५ अर्ब रुपैयाँ कोरोना खोपका लागि छुट्याइएको जानकारी दिए ।
शुक्रबार प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
भीमदत्तमा बिना व्याज र धितोमा दिन थालियो कर्जा, पहिलो चरणमा १४ जनालाई प्रदान
महेन्द्रनगर : भीमदत्त नगरपालिकाले ब्याज र धितो बिनाको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको छ । नगरपालिकाले गत वर्ष नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखासित सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको थियो ।
बैंकसित गरिएको सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा १४ जनालाई अढाई लाखदेखि पाँच लाखका दरले कर्जा प्रदान गरिएको छ । एक सय युवालाई स्वरोजगार बनाउन अघिल्लो वर्ष नगर सभाबाट कार्यक्रम पारित गरिएको थियो ।
भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा कार्यक्रम गरी उद्यमीलाई कर्जा रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । भीमदत्तका मेयर सुरेन्द्र विष्ट, आर्थिक विकास समिति संयोजक डम्बर बहादुर कार्की, बैंकका महेन्द्रनगर शाखा प्रमुख महेशराज जोशी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रशाद जोशीलगायतले संयुक्त रुपमा चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले स्वरोजगार सिर्जना गर्न र उद्यमशिलताको विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
‘हातमा सीप भएका र केही गर्ने इच्छा भएका युवाहरुले पुजी अभावमा बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘व्यवसाय सुरुवातसँगै त्यसको प्रवद्र्धनका लागि लगानी स्वरुप ऋणमा ब्याज अनुदान सहयोग गरेको हो, सबैले उत्पादनसँग जोडिन सक्यो भने देश आत्मनिर्भर र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।’
उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने बताउँदै दोस्रो चरणको सहुलियता कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन उनले कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा बैंक शाखा प्रवन्धक जोशीले बिनाधितो सहुलियत कर्जाबारे जानकारी गराउँदै नगरपालिकाको सिफारिस अुनसार बंैकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमी, र दलित सुमदाय व्यवसाय विकास कर्जा गरि पाँच प्रकारका कर्जा लगानी गरिरहेको रहेको बताए ।
पहिलो चरणमा ६७ लाख ४० हजार कर्जा लगानी गरिएको छ । बैकले दिपेश केरा फर्मलाई दुई लाख ५० हजार, रोजी पोल्टी फर्मलाई चार लाख ९० हजार र अन्य व्यवसायीक फर्मलाई ५÷५ लाख कर्जा उपलब्ध गराएको छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कर्जा लगानी गरेको उनको भनाई छ ।
नगरपालिकाको सिफारिसमा बैकले बिनाधितो बिना व्याज उद्यमीलाई कर्जा दिने र नगरपालिका उद्यमीको ब्याज तिरिदिने सहमति भएको छ । २०७७ कार्तिक २७ गते बैक र नगरपालिकाबिच मेयर उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमअन्तरगत ऋण प्रभाव तथा ब्याज अनुदानसम्बन्धि सम्झौता भएको थियो । सहुलियत कर्जाका लागि चरणको आवेदन खोल्ने तयारी गरिरहेको नगरपालिकाका आर्थिक विकास समिति संयोजक डम्बर कार्कीले बताए ।
ऐनका अनुसार आवेदन संकलन गरि कार्यविधिअनुसार कर्जाका लागि उद्यमी छनौट गरिनेछन् । त्यस्तै सहुलियत कर्जा पाएका जित पार्कीले विना धितो बिना व्याज कर्जा पाएकोमा खुसी लागेको बताए । वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतमा रहेका पार्की स्वदेशमै उद्यम गर्न नेपाल फर्केका थिए । उनले पोल्टी फर्म सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कर्जाले व्यवसाय विस्तार प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
कृषि पेशाले विदेशिएका गुल्मीका युवा कृषि पेशामै राज गर्दै
गुल्मी : खाइलाग्दो ज्यान । भरिलो र हँसिलो अनुहार । कलकलाउँदो जोवान अनि सरल स्वभाव ।
जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका – ४ पारिखर्कका दुई दाजुभाइ कमल अनि कपिल ज्ञवाली । एउटाले होटल म्यानेजमेन्ट त अर्कोले म्यानेजमेन्ट पढेका । यी दुई भाइ अहिले ‘दाजुभाइ कृषि फार्म’ को म्यानेजमेन्टमा व्यस्त छन् । वि.स २०६८ सालमा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दै गरेका कमल गाउँमा केही गर्छु भनेर काठमाडौंदेखि गाउँ फिरेर कुखुरा पाल्न सुरु गर्छन् । सुरुमा करिब ५० हजार लगानी गरेर खोर निर्माण गरि १ सय कुखुरा पाल्न सुरु गरे उनले । ‘मेरो मन त तरकारी खेती तर्फ आकर्षित थियो तर पानीको निकै समस्या, त्यसैले त्यो बेला कुखुरा पाल्न सुरु गरे’ विगत सम्झिँदै उनले भने ।
तर, त्यो बेला ५० कुखुरा मरे । बाँकी ५० वटाबाट करिब ७ हजार आम्दानी गरेका उनले आधा कुखुरा मर्दा पनि सन्तोषजनक आम्दानी मिलेपछि अझैँ व्यवस्थित तरिकाले कुखुरा पाल्ने रहर उतिबेलै जागेको बताए । ‘घर नजिकै केही जग्गा लिजमा लिएर साढे ५ लाख लगानीमा २ देखि ३ हजार ब्रोइलर कुखुरा पाल्न थाले’ ज्ञवाली बताउँछन् । त्यसरी कुखुरा पाल्दा उनलाई एक लटमा ७० हजारसम्म नाफा मिल्थ्यो ।
दुष्टले लखेटेपछि मुटुमा माटो सजाएर दुबईमा
राम्रो प्रगति गर्नेको खुट्टा नतान्ने ठाउँ कहाँ होला र ? ज्ञवालीले गरिरहेको काम खै कसलाई देखिनसक्नु भएन छ, एकदिन कुखुरालाई खुवाउने पानी ट्याङ्कीमा अपरिचित व्यक्तिले विष मिसाइदिएछन् । जसका कारण सबै कुखुरा मरे । ल्याब परीक्षणबाट त्यो पुष्टि भएको उनको भनाई छ ।
यहि घटनाले गाउँमा बसेर सफल कृषि कर्म गर्ने उनको लक्ष्य सबै भताभुङ्ग भयो ।
कल्पना पनि नगरेको उनलाई १२ लाख घाटा लाग्यो । पानीमा नै विष राखिदिएपछि फेरि कुखुरा पाल्ने हिम्मत आएन उनमा । कृषि गरौँ पानी छैन, अन्य पेशा गाउँमा खासै उपलब्धिमुलक देखेनन् उनले । लगानी पनि सबै डुबिसकेको थियो । ज्ञवालीसँग अब एउटै विकल्प थियो, वैदेशिक रोजगार । गाउँ फिरेको ४ वर्षमै उनी विदेश उड्न बाध्य भए । वि.स २०७२ बैशाखमा उनी आँखाभरी आँसु लिएर दुबईको लागि उडे । संकल्प थियो, डुबेको ऋण तिरेर पुनः गाउँमा गएर केही नयाँ गर्ने ! करिब साढे ३ वर्ष दुबईमा उनले पसिना बगाए । रगत पोखे । गाउँको तुलनामा कमाई राम्रै थियो तर मन कत्ति खुसी थिएन । अर्काको लागि पसिना बगाउनुपर्दा ज्ञवालीको मन निकै पोलिरहेको थियो । घरिघरि घर फर्कु लाग्थ्यो तर डुबेको लगानी सम्झिँदा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । ‘एउटा फुलले अरुलाई सुगन्ध दिनको लागि मात्रै आँधी, हुरि, चट्याङ, घाम, पानी इत्यादिको सामना गर्छ । अन्ततः फुलेर सुगन्ध फैलाउँछ नै। म पनि अब गाउँमै केही गर्छु, गाउँकै माटोसंग लडिबुढी गर्छु भन्ने अठोट लिएर फर्किए’ उनी भन्छन् ।
सपनाले सिंगारिएको कृषि जीवन
अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘इफ यु क्यान डृम इट, यु क्यान डु इट’ अर्थात यदि तिमी सपना देख्छौं भने तिमीले त्यो गर्न पनि सक्छौँ । ठ्याक्कै यो उखान अहिले ज्ञवालीसंग मेल खाएको छ । विगत ३ वर्षदेखि ज्ञवाली अहिले कृषि कर्ममा पुनः फरक शैलीमा होमिएका छन् । उनलाई साथ दिन उनका भाइ कपिल ज्ञवाली पनि कृषि कर्ममै होमिएका छन् । त्यति मात्रै हैन उनको पुरै परिवार नै कृषि कर्ममा होमिएको छ ।
३ वर्ष अघि साढे ३ लाख लगानीमा टमाटर र काउली खेती गर्दै आएका ज्ञवालीले पहिलो वर्ष त्यति नाफा पाएनन् । ‘प्राविधिक ज्ञान थिएन, सिँचाइको पनि त्यति राम्रो ब्यवस्थापन हुन सकेन । जति लगानी त्यति बराबरको मात्रै उत्पादन बेच्यौँ’ उनले बताए । पहिलो वर्ष लगानी मात्र उठेको तर श्रम पुरै खेर गएकोले घाटा बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
मल्चिङ, थोपा सिँचाइ लगायत अन्य प्रविधि प्रयोग गरेमा कृषि कर्मबाट निकै राम्रो हुने बुझेपछि ३० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर करिब २५ लाख लगानीमा ५५ वटा टनेल र एउटा १२ रोपनी जग्गामा एन्टिहेल नेट प्रविधि प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा टमाटर खेती सुरु गरेको उनी बताउँछन् । टनेल पनि आफुहरु दुई भाइ मिलेर बनाएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
अहिले सिँचाईको अभाव पनि छैन । उनीसंग आफ्नै प्राइभेट लिफ्टिङ पानी छ । फार्मभन्दा ४ सय मिटर तलबाट लिफ्टिङ पानी ल्याई साढे २ लाख लिटर पानी अट्याउने प्लास्टिक पोखरी समेत बनाएको उनले बताए ।
यसरी प्रविधिसंग जुधेर खेती गर्दा अहिले पुरै लगानी उठाएर पनि ८ लाख भन्दा धेरै नाफामा पुगिसकेको ज्ञवालीको भनाई छ । दाजुभाइ कृषि फार्मले आफ्नो उत्पादन आफै बिक्री गर्दै आएको छ । ‘स्वतन्त्र रुपमा आफैले बजारीकरण गरेका छौं बुचौलियाहरुले नाफा खान पाएका छैनन् । आफ्नो उत्पादन आफैले बजारीकरण गर्दा हुने नाफा र बिचौलियाहरुलाई दिँदा धेरै फरक पर्छ’ उनले भने । अहिले करिब ६ सय क्विन्टल टमाटर उत्पादन भएकोमा ४ सय क्विन्टल गुल्मी र बाँकी बुटवलमा लगेर बेचेको उनको भनाई छ । दैनिक ४० केजी अकबरे खुर्सानी पनि बेच्दै आएको उनी बताउँछन् । आगामी बैशाखदेखि अरु कृषकले यदि आफुसंग मिलेर स्वतन्त्र बजारमा उत्पादन बेच्न चाहेमा आफुले बजारीकरण गरिदिने उनको भनाइ छ । उनले यो वर्ष थप २० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर फार्मलाई थप विस्तार गर्न लागेका छन् ।
नक्कली कृषक पोस्ने स्थानीय सरकार पेशेवर कृषि उद्यमी देख्दैन
बेला बेलामा नक्कली किसानले अनुदान पाउँने गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर, नाकै मुनि पेशेवर कृषकको फार्म संचालन भइरहँदा पनि अझैसम्म गाउँपालिकाबाट ज्ञवालीको फार्म अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहबाट कुनै अनुदान उनले पाएका छैनन् । ‘कुनै पार्टीको झोले भएको भए मैले अनुदान पाउँथे होला, तर म स्वतन्त्र किसान, टेबल टक गर्न जान भ्याउँदिन, उत्पादन तिर ध्यान दिन्छु । आजसम्म कसैले केही अनुदान दिएको छैन’ उनले भने । वास्तविक किसान पहिचान गरेर मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने र कृषकलाई हौसला दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले कृषकलाई छुट्याइएको अनुदानमा आफ्नो पनि अधिकार रहेको उनी बताउँछन् । उनले फार्म संचालन गरेबापत २ वर्षको कर समेत तिरिसकेका छन् ।
ज्ञवालीले गाउँमा रोजगारी समेत दिएका छन् । २ जना कामदार पहिलेदेखि नै निरन्तर काम गर्दै आएका छन भने अन्य बेलामा पनि गाउँका धेरैलाई त्यहाँ रोजगार मिलेको छ । आगामी दिनमा सरकारले पनि आफ्नो कर्ममा साथ र सहयोग दिए यस क्षेत्रकै नमुना कृषक बनेर देखाउने हिम्मत २८ वर्षीय ज्ञवालीको रहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुर र भक्तपुर इन्टरनेशनल अस्पतालबीच सम्झौता
भक्तपुर : उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुर र भक्तपुर इन्टरनेशनल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुरका सदस्यहरु तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको आकस्मिक, स्वास्थ्य उपचार र प्रयोगशाला परिक्षण, तथा अन्य सेवाहरुमा विशेष सहुलियत सहित विभिन्न छुटका साथ सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा संघ र कौशलटारस्थित भक्तपुर इन्टरनेशनल अस्पतालबीच सम्झौता भएको हो ।
उद्योग वाणिज्य संघ भक्तपुरमा आयोजित एक समारोहमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए भने अस्पतालको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजीकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सभामा बोल्दै संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले यस सम्झौताले संघका सदस्य मात्र नभई परिवारहरुलाई पनि अस्पतालले राम्रो सेवा प्रदान गरी शुल्कमा पनि विशेष सहुलियत दिने भएको बताए । यसले समाजमा राम्रो र सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र यस्तो किसिमको सम्झौताले संघका सम्पूर्ण बहालवाला सदस्यहरुलाई प्रिभिलेज कार्ड प्रदान गरिने हुनाले यसबाट हाम्रा सदस्यहरु अनावश्यक झमेलाबाट जोगिने र त्यस्तो किसिमको सम्झौताले सदस्यहरुलाई स्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा सहजिकरण हुने उनले बताए ।
अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी कुमार श्रेष्ठले यस समझौताले अस्पताल र संघबीच रहेको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्ने छ भन्दै अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा कुनै कमी नगर्ने विश्वास दिलाएका थिए । त्यसैगरी अस्पतालले संघका सम्पूर्ण सदस्यहरुको प्रिभिलेज कार्ड बनाउन शुरु गरी सकेको र केही दिनमै उपलब्ध गराउने पनि बताएका छन् ।
कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव प्रसाद मानन्धरले संघका सदस्यहरुका लागि यो सेवा राम्रो हुने बताउँदै यसमा कुनै पनि प्रकारले सेवाको स्तरमा कमी नहोस र यसले उदाहरणीय नतिजा दिनेमा ढुक्क भएको बताए । कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार तथा कार्य समिति सदस्यहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
विवादित बिलबोर्डको २६ महिनादेखि विद्युत महशुल तिर्न बाँकी
धनगढी : जडान भएदेखि विवादमा तानिँदै आएको बिलबोर्ड कम्पनीले २६ महिनादेखि विद्युत महशुल नबुझाइएको पाइएको छ । कैलालीको अत्तरिया चोकमा जडान गरिएको उक्त बिलबोर्डका नाममा जडान भएको मिटरको २०७६ साउन यता महशुल नतिरेको पाइएको हो ।
बिलबोर्ड जडान गरेको क्यालडोन ग्राफिक्स नेपाल नामक कम्पनीले २६ महिनाको २ लाख ११ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ विद्युत महशुल तिर्न बाँकी देखिएको अत्तरिया नो लाईटले मध्यान्हलाई जानकारी दिएको छ । नो लाईटका अनुसार क्यालडोन ग्राफिक्स नेपाल कम्पनीको नाममा २०७६ बैशाख महिनामा २ फेजको मिटर जडान भएको छ ।
मिटर जडान भएपछि २०७६ असार १७ गते १७ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तिरेको देखिएपनि त्यसयता विद्युत महशुल नतिरेको नो लाईटका कर्मचारी गुणराज भट्टले मध्यान्हलाई बताए ।
क्यालडोन ग्राफिक्स नेपालका संचालक कृष्ण आचार्यले शुरुदेखि नै काम गर्न नदिएकाले महशुल पनि नतिरेको बताए । उनले बिलबोर्ड संचालन नै गर्न नपाएकाले विद्युत महशुल पनि नतिर्ने बरु लाइन काटिदिए फरक नपर्ने बताए । ‘काम गर्न नगरपालिकाले नदिने अनि महशुल मात्रै कसरी तिर्ने,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘जसले काम गर्न दिएको छैन उसैले महशुल तिर्नुपर्छ ।’
उनले लाखौं रकम खर्च गरेर बिलबोर्ड राखेको र नगरपालिकासँगको सम्झौता अनुसार काम गर्न नपाएपछि आफू घाटामा गएको बताए ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अत्तरिया चोकमा राखिएको उक्त बिलबोर्डबाट गोदावरी नगरपालिकाले समेत फाइदा लिन सकेको छैन । बिलबोर्ड जडानपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि हुने भनिएपनि सम्झौता अनुसार काम नहुँदा करसमेत उठ्न सकेको छैन ।
गोदावरी नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद जोशीले नगरपालिकाभित्र जडान भएका सम्पूर्ण व्यावसायिक प्रयोजनका विज्ञापनको कर ठेकेदारमार्फत उठाउने गरिएको बताए । उनले बिलबोर्डमा पनि व्यावसायिक प्रयोजनका सामग्री राखे बापत कर लिने सम्झौता भएको मध्यान्हलाई बताए ।
उता क्यालडोन ग्राफिक्स नेपालका संचालक आचार्यले कामै गर्न नपाएपछि कर पनि नतिरेको बताए । उनले नगरपालिकासँग काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पटक-पटक आग्रह गरेपनि आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको बताए ।
बिलबोर्डमा पछिल्लो समय गोदावरी नगरपालिकाले नेपाल भ्रमण वर्षका पोष्टर राखेको छ । तर, लामो समयदेखि बेवास्ताका कारण ती पोष्टर पनि च्यातिएर झुत्रो भएका छन् ।
व्यावसायिक प्रयोजनका सामग्री राखिएको भन्दै स्थापनाकालदेखि नै बिलबोर्डमा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । बिलबोर्ड व्यावसायिक प्रयोजनका विभिन्न कम्पनीका विज्ञापन राखिएपछि स्थानीयले चोक कुरुप बनेको भन्दै विज्ञापन नै च्यातेका थिए ।
त्यसपछि नगरपालिकाले बिलबोर्डमा सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्र झल्कने सामग्री राखेको थियो । अहिले आएर नगरपालिकाले पनि वास्ता नगर्दा बिलबोर्डले चोक झन कुरुप बनेको छ । बिलबोर्डमा लाइटसँगै तापक्रम र समयसमेत देखिने सामग्री राखिएका भएपनि पछिल्लो समय ती सामग्रीले पनि काम गर्न छोडेको स्थानीयले बताएका छन् । गोदावरी नगरपालिका र क्यालडोन ग्राफिक्स नेपालबीच चोकमा १५ वर्षसम्म बिलबोर्ड राख्ने सम्झौता भएको थियो ।
शेयर लगानीकर्ताहरुद्वारा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग
काठमाडौं : शेयरबजारलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको भन्दै रुष्ट बनेका लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीनामा माग गरेका छन् । शेयर धितोकर्जामा कडाइ गरेसँगै लगानीकर्ता आक्रोशित बनेका हुन् ।
लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वमा पुँजीबजार सुधार संघर्ष समिति नै गठन गरेर लगानीकर्ताले सो व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन तयारी गरेका हुन् ।
आज समितिले निकालेको विज्ञप्तिमा आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर क्षमताअनुसार ऋण लिन पाउने सहज व्यवस्थालाई अप्ठेरो बनाउँदै शेयर धितो ऋणमा सीमा तोकिदिएको आरोप लगाइएको छ ।
शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेसँगै पछिल्लो समय बजार निरन्तर घटिरहेको छ भने आज आइतबार पनि ५ प्रतिशतले नेप्से घटेर केही समयका लागि कारोबार नै बन्द गर्नुपरेको थियो ।
लगातार नेप्से घट्न पुगेपछि लगानीकर्ता गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागसम्म पुगेका हुन् । समितिले १६ बुँदे मागसहित राजीनामा माग गरेको छ ।
उक्त मागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा, धितोकर्जा नीति तत्कालै परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका समेटिएका छन् ।
लगानीकर्ताले आफूहरूले राखेका माग तत्काल पूरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेपालकै ठुलो भाटभटेनीको शाखा इटहरीमा
इटहरी : नेपालको सबैभन्दा ठुलो र अग्रणी सुपरमार्केटको छाप बनाएको भाटभटेनीले शनिबार सुनसरीको इटहरीमा १९ औं शाखा शुभारम्भ गरेको छ ।
उपत्यकामा अपार सफलता पछि प्रदेश एकका मुख्य शहरहरूमा शाखा स्थापना गर्ने क्रममा धरान, बिराटनगर, हुँदै १९ औँ शाखा इटहरीमा शुभारम्भ भएको हो ।
उक्त शाखालाई नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मानिएको छ । करीब ३ अर्बको लगानी रहेको सुपर मार्केटलाई सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङले हिन्दु परम्पराअनुसार पुजा गरेर औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए ।
पूर्वपश्चिमराजमार्गअन्तर्गत इटहरी १७ लविपुरमा शनिबारदेखि शुभारम्भ भएको भाटभटेनीमा तिन वटा ब्लक रहेका छन् । विभिन्न आवश्यकीय सामग्री किनमेलसँगै मनोरञ्जन प्रदान गराउन मार्केटभित्रै सिनेमाहल सञ्चालन हुने भएको छ ।
शनिबारदेखि औपचारिक सेवा शुभारम्भ गरेको भाटभटेनिले ओपनिङको अवसर पारेर अल्कोहल र निकोटिन ग्रुपका बाहेक सबै सामानमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । यो छुट आगामी एक महिना सम्म रहने भएको छ ।
मार्केटको पहिलो तला अन्तरगत ५०० सवारी साधनहरू सजिलै अटाउन सकिने गरी अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सुविधा रहेको छ । पहिलो तला किचनवेयर र बालबालिकाका खेलौनाका लागि छुट्याइएको छ । यसमा ७ वटा काउन्टर हुनेछन् ।
दोस्रो तलामा कपडा, जुत्ता आदि राखिएका छन भने यसमा १० वटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सी ब्लकको भुइँतलामा केएफसी, काठमाडौंको पेपे पिजा र आँगन रेस्टुरेन्ट रहेको छ । सोही तलामा बालबालिका खेल्ने ८ हजार वर्गफिटको प्ले ग्राउन्ड पनि बनाइएको छ । यसभन्दा माथि हिमालय जाबा कफीको रेस्टुरेन्ट राखिएको छ ।
चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै टिभिएसले ‘सरप्राईज’ योजना, यस्ता छन् उपहार कार्यक्रम
काठमाडौं । दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै टिभिएसले अत्यन्तै आकर्षक ‘टिभिएस सिक्स प्राइजको सरप्राईज’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ६ पटकसम्म उपहार जित्न मिल्ने यस उपहार योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले विभिन्न टिभिएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा हात खाली नहुन्जेल विभिन्न आकर्षक तथा भव्य उपहारहरु प्राप्त गर्ने जगदम्बा मोटर्स प्रालिले जनाएको छ ।
योजना भदौ १६ देखि सुरु भई चाडपर्वहरुको समापनसँगै सकिने जनाइएको छ । कम्पनीले जनाएअनुसार यस योजना मुलुकभरिका सम्पूर्ण टिभिएस सोरुमहरुमा उपलब्ध हुनेछ ।
चाडपर्वको हर्षको समयमा ग्राहकको जीवनमा थप उत्साह भर्न यस योजनाले एक पटक, दुइ पटक मात्र नभएर पुरै ६ पटकसम्म प्राइजको सरप्राईज दिने कम्पनीको भनाई छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले किन्दै नकिनी टिभिएस नेपालको अनलाईनमा गएर रु.१ लाखसम्म जित्न सक्नेछन् । सवारी खरिद गर्दा १० लाखसम्मको भारी नगद हात पार्न सक्ने जनाइएको छ । यति मात्र नभएर दैनिक स्मार्ट फोन पनि ग्राहकको लागि उपहार स्वरुप, यस योजनाअन्तर्गत राखिएको छ ।
यसैगरि यस योजनाले ग्राहकलाई हरेक हप्ता शत प्रतिशत क्यास ब्याकको अफरसमेत राखेको छ । जसमा ग्राहकले सवारी खरिद गर्दा बुझाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउनेछन् भने हरेक महिना टिभिएस अपाचे आरआर ३१० समेत जित्न सक्नेछन् ।
मुद्रण महासंघको प्रदेश समिति गठन
नेपालगञ्ज : नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ लुम्विनी प्रदेश कमिटी गठन गरिएको छ । लुम्विनी प्रदेशका मुद्रण व्यवसायीहरुलाई संगठित गर्नका लागि प्रदेश राजधानी दाङको भालुवाङमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय भेलाले महासंघको २१ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गरेको हो ।
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक विष्णु तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न लुम्विनी प्रदेश स्तरीय भेलाले रुपन्देहीका मुद्रण व्यवसायी कृष्ण पराजुलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा गठन भएको समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा बाँकेका पूर्णलाल चुके र उपाध्यक्षमा रुपन्देहीका घनश्याम घिमीरे, सचिवमा बाँकेका सि.एम. उपाध्याय, कोषाध्यक्षमा दाङका गिरिराज आचार्य र सह–सचिवमा रुपन्देहीका डिल्ली नारायण पाण्डे चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाचित सचिव उपाध्यायका अनुसार शुक्रवार सम्पन्न प्रदेश स्तरीय भेलाद्वारा प्रदेश भित्रका १२ जिल्लाका १/१ जना सदस्य राखिएको छ । सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको हो । त्यसैगरी सदस्यहरुमा बाँकेका हरि प्रसाद ज्ञवाली, पाल्पाबाट जगदिश भट्टराई, रुपन्देहीबाट निर्मल अर्याल, कपिलवस्तुबाट जि.पि. पाण्डे, दाङबाट गजेन्द्र वली, बर्दियाबाट मेघराज सिग्देल चयन भएको जनाइएको छ । बाँकी सदस्यहरु समितिको बैठकले मनानयन गर्ने सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । गजेन्द्र बहादुर वली, मेघराज सिग्देल, जगदिश भट्टराई, गुमान प्रसाद पाण्डे र निर्मल आचार्यलाई चयन गरिएका महासंघका संस्थापक सचिव तथा केन्द्रीय सल्लाहकार खेमराज लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन मण्डलमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यद्वय बाँकेका कुशुम बस्नेत र दुर्गा भण्डारी थिए ।
महासंघकी केन्द्रीय सदस्य मीना सुवेदी ढकालले सहजीकरण गर्नु भएको उक्त भेलामा महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक विष्णु तिवारी, महासंघका केन्द्रीय सदस्य गिरिराज गैरे, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पराजुली, नेपाल मुद्रण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष विनोद पौडेल, रुपन्देही मुद्रण सघका अध्यक्ष हरि पहारी, बाकेका अध्यक्ष विनोद पौडेल, बर्दियाका अध्यक्ष महेश अधिकारी लगायत मुद्रण व्यवसायीहरुले महासंघले मुन्द्रण व्यवसायीको हक, हित र अधिकारका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा पहल र दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तिवारीले व्यवसाय प्रर्बद्धनका लागि व्यवसायीक एकता नै प्रमुख आधार रहेको हुँदा त्यसमा जोड दिए । तिवारीले प्रदेश स्तरीय समस्याहरुको पहिचान गरी प्रदेश सरकारसँग पुरा गराउनेतर्फ लाग्न आग्रह गरे ।
व्यवसायी–व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा व्यवसाय धरासायी बन्नुका साथै प्रविधिको प्रयोग र राज्यका नीतिगत समस्याहरु हटाउन नसकिएको गुनासो उनीहरुको रहेको छ ।
महासंघका संस्थापक सचिव खेमप्रसाद लुइँटेलले राज्यका गलत नीतिका कारण व्यवसायमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै त्यसका सुधार गर्न महासंघले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हामी बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हामी आफैं साधुरिँदै गएको हुँदा त्यसमा तत्काल सुधार गरेर सहयोगिको भावनाको विकास गर्न आग्रह आग्रह गरे । भेलामा बोल्ने वक्ताहरुले हिजोको परम्परागत शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यसको लगानी र प्रतिफलका बारेमा जानकार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एकअर्कामा सहयोगी भावनाको विकास हुन नसक्दासम्म व्यवसायमा प्रगति हुन नसक्ने बताएका थिए ।